Iwe unoda here kubvunza iyi minomwe mibvunzo nezve ballet kudzidza? - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Iwe unoda here kubvunza iyi minomwe mibvunzo nezve ballet kudzidza?
Ballet, yeEuropean echinyakare dhanzi, akave nemimba munguva yeItaly Renaissance Muhafu yepiri yezana ramakore rechi17, yakatanga kukura uye kuva inozivikanwa muFrance uye zvishoma nezvishoma yakava nyanzvi. Yakave yakakurumbira pasirese panguva yekuenderera mberi kwehunyanzvi.Chimwe chezvakakosha maitiro e ballet ndechekuti vatambi vemitambo vanonongedzera pasi nezvigunwe zvavo pavanenge vachiita, saka inonziwo tiptoe kutamba.Chinyorwa ichi chinonyanya kuunza mapfumbamwe ekucherechedzwa mu ballet. kudzidza.
1. Pese pandinoita kufamba kusimudza mapendekete nekusaziva.
Kunorema bendekete, iko kunzwika kwekukurumidza ndiko kukosheswa kwemutsipa, mapendekete kuti uwane chiuno. Mapfudzi anorema anoumbwa nekukochekera mapendekete pamwe chete, kutambanudza mapendekete panze, uye kuburitsa chipfuva kunze. hazvina basa kuti ruoko ruripi, harukanganisa bendekete kana kumashure nzvimbo.
2. Zvinomira sei kumira pamaoko ako? Ndinofunga maoko andinogadzira pamberi pegirazi haana kunaka.
Ivo kazhinji vakaomarara zvakanyanya, sekufema uye kukwazisa. Ini ndakadzidza kakawanda zvekuti handikwanise kuzviita.
Handstand inoreva pfungwa yenzvimbo pakati pemaoko nemuviri.Kutanga, zvisinei kuti ruoko ruripi, kune arc kubva pabendekete kusvika kugokora kusvika pachiwoko kusvika pamunwe wemunwe. Mudzidzisi anonyanya kutaurwa iko kunzwa kwe Kudonha kwemvura kubva pabendekete kusvika pamunwe wemunwe.Dambudziko rakawanda ruoko kune vanotanga igokora.Haikwanisi kusimuka zvakare kugokora pano "rakatyoka" rabviswa.Kugadzirisa dambudziko regokora, unofanirwa kugadzirisa dambudziko remaoko makuru Semuenzaniso, paunenge uchiita maoko manomwe, unonzwa nzvimbo huru kwazvo mumaoko ako nemuviri uyezve musana unobatsira, zvinoita sekunge panotangira ruoko kubuda kwete kubva pabendekete asi kubva pabendekete. Kufema kwemaoko uye kunaka kwesaruti kunonyatsoda kudzikiswa nekudzidzira. Nechivimbo, zvakasikwa kuti uzviite nemazvo.Kuzviita nemaune kunogona kuomarara kwazvo.
3. Pukuta pasi, enda kunze unogona zvakare, kudzoka makumbo kana kukotama, kana kudzokera kunguva haigone kubata chitsitsinho, handizive kuti ndiani anganongedze.
Paunopukuta pasi kunze, inoenderera nzira kubva kubhora retsoka yako kusvika pakutsika kwetsoka yako. Pakudzora, iyo yekumberi zvakare chiitiko chinoramba chichienderera kubva kuchitsiko kusvika kuhafu-tiptoe kusvika kuhafu-soles kusvika kuzara soo.Gumbo gumbo chitsitsinho, kudzoka chigunwe danho Paunodzoka negumbo remagetsi rakakotama, zvinoreva kuti gumbo rinopikisa wakagara pachiuno, ndosaka uchinzwa wakareba kana uchipukuta pasi.Kana iwe uchipukuta pasi, chinja huremu hwako kugumbo rekutsigira, asi usadzikise hurefu hwako. Panzvimbo iyoyo, fambisa iyo kumusoro. Izvozvi zvinodzoka. Unofanira kusimudza gumbo rekutsigira nemuviri kudivi iri. Kana makumbo emagetsi achidzoka haufanire kubata zvitsitsinho, iwe unofanirwa kungo chengeta mukati me zvidya zvako pamwe chete nemabvi ako pamwechete.Iwe unoti mhuru inorema, chitsitsinho chinotsikirira chitsitsinho, pamwe zvinokonzeresa gumbo kukotama.
4. Kirasi yekutanga mukuita izwi rekuvhura kana gumbo reruboshwe kana mhasuru yadhonzwa netsaona, kunyangwe izvozvi, asi nguva dzese kana uchiita izvi uye gumbo rekumanikidza uine mumvuri wepfungwa, ungadzivise sei kudhonza?
Kupatsanurwa kunofanirwa kuitwa mushure mekunge muviri wapisa zvakakwana. Kupora kwakazara kubva kune rakabvaruka ligament kunonoka.Nzira yakanakisa yekudzivirira kukuvara kwekushushikana ndeye kutora kudziya-up kurovedza muviri zvakanyanya usati warovedza.Rega mhasuru dzipinde mukufamba zvachose. Dhinda gumbo kuzungunusa chiuno uye zvichingodaro pakudziya kufamba kunofanirwawo zvinoenderana nemamiriro ako chaiwo kubva padiki amplitude kuti udye zvakare zvakanyanya kusunungura zvakare.Vakuru vane kumwe kunzwisisa kwekugona, kusiyana nevana vanodzidza, vakati zvakare havanzwisise vanogona kungoteedzera.Kana iwe ukaona kuti iwe haunzwisise chiito, bvunza mudzidzisi wako apedza kirasi.Iyo iri nyore kutevedzera kana iwe uchinzwisisa.Ndinotenda mudzidzisi achakubatsirawo iwe kuwana nzira kwayo.Kushanduka kubva kune wekutanga kuenda kune wekutanga kunenge kuchikurumidza zvakanyanya.Zvinokurudzirwa kuti unzwisise zvakakwana zviitwa padanda. tanga uine pfungwa yakajairika yekufamba kwehunyanzvi seyekutenderera uye kusvetuka Usaedze zvakanyanya, izvo hazvibhadhare kukwikwidza gumbo rako.
5. Kana riri dambudziko rekushungurudzika pakukuvara panguva yekurovedza muviri, zvakajairika mumajimu ese izvozvi.
Izvo zvikonzero zvinotevera: kukwana-kudziya usati waekisesaiza, Ita nekukurumidza uye edza kukwana.
Warm usati waita maekisesaizi, sekumhanya uye kusvetuka, kuti unyatsodziya muviri kana bhati yekushambidza kuti ikurumidze kufamba kweropa, zvinoenderana nekukasira kudziya;
"kutambanudza", "kutwasuka" sekureba sekuedza kuri nyore kuwana, asi "kuvhura" zvakati omei, uye zera rekupfava kwemitsipa zvine hukama, zvishoma nezvishoma, nhanho nhanho, chakakosha kushingirira , ichave yakanyanya kukwana zuva nezuva.Ndinorangarira chirevo chema ballerinas: Kana iwe usingaite zuva, iwe uchazviziva Mazuva maviri asina kudzidzira vatinoshanda navo vanoziva; Mazuva matatu vasina kuita uye vateereri vanoziva.
6, dumbu uye dumbu renyama ndiro rakanyanya kunetsa kurasikirwa, maitiro ekuita?
Asi nekudzidzira, iwe unogona kukudziridza chimiro chaicho kuitira kuti muviri wako uratidzike kunge wakaenzana.Dumbu mukati.Muchokwadi, iwe unofanirwa kuita izvi muhupenyu hwako hwezuva nezuva, kunyangwe iwe wakamira kana kufamba.Pane zvakare nzvimbo dzakamira kubva kumusoro kusvika pasi: mutsipa wakareba, mapfudzi akavhurika, chipfuva kunze, mudumbu mukati, muchiuno mudenga, kufema kwepanyama.Zvinonzwa kunge urikureba.Nekugara uchijaira, mamiriro emunhu anozopedzisira ave akaenzana.
7. Ukamira negumbo rimwe, zvinonetsa kuti uwane chitsitsinho pamwe nekuti nyama yemhuru yakasimba.
Hapana mutemo wekuti iwe chengeta zvitsitsinho zvako pamwechete.Vamwe vatambi vane makumbo akafanana neX uye hazvigoneke kuchengeta zvitsitsinho zvavo pamwechete.Unoda chidya chakasungwa kwazvo, mabvi akasungwa zvine mutsindo, mhasuru iri pamusoro pe meniscus inodhonza, crus haina kubhururuka zvakasununguka zvakanaka.Mashanu haatombovhurika, uye nyama yezvidya iri pamusoro pawo uye kana iwe ukaedza kuatenderedza haugone kutwasanudza tsoka dzako Edza kumira shanu, chaizvo haugone kuita diki T-nhanho. zvishanu uye zvakapfigwa, uye zvinotungamira kutsoka, zvinokuvadza kune musculoskeletal.Kuwedzera, kuti uve netsoka yakanaka chinzvimbo, zvimwe zvikamu zvemuviri zvinoshandisa zvisingazive zvinomira, asi hazvigone kusunungura zvimwe zvikamu zvemuviri. chetsoka chinzvimbo chinofanirwa kukwidziridzwa zvishoma nezvishoma Uyezve, kana uchiita 5-bit PLIE, tsoka kumashure rinosvetuka risingazive, uye kune imwe Angle, haizokwanise kukanda pasi. kwete kuvhura zvakakwana kuti ukotamire mukati.Kune imwe Angle isingakwanise kutsikitsira pasi zvakajairika zvakare ndezvechokwadi.Half squat chero kureba squat kuti squat pasi kwete kuti udzike pasi chinzvimbo.Squat pasi uye simudza zvitsitsinho zvako.
Yapfuura:Kuongorora - kweakakosha - ballet - yepanyama kudzidza
Tevere:Vacheche vanogona sei kudzidza ballet